Ngwọta Dialysis China Peritoneal (CAPD) Ndị na -emepụta Line Production na ndị na -ebubata ya IVEN
Ngwọta Ngwọta Peritoneal Dialysis (CAPD) Okwu Mmeghe:
Maka mbipụta akpa akpa CAPD, akpụ, jupụta na akara, ịgbado ọkụ, igwe na -eme akpa akpa PVC.
Usoro mmepụta usoro CAPD Dialysis mmepụta usoro
Ogwe akpụ akpa
Igwe ịgbado ọkụ na -eji ihe eji akpụ akpụ nwere oghere abụọ na ebu na -agbanwe agbanwe nwere efere jụrụ oyi, na -eme ka ọ na -agbanwe agbanwe na -eme otu ọnọdụ ahụ, ma hụ na akụrụngwa na usoro ịkpụzi na nkwụsị agaghị eme ihe mkpuchi akpụkpọ ahụ ọkụ; Mma ngwaahịa dị mma.
Ngwongwo na -ekpo ọkụ na thermocouple na efere aluminom alloy, kpo oku na mbufe ọkụ bụ otu, njikwa okpomọkụ bụ nkenke, belatara mfu ọkụ, agaghị apụta oke okpomọkụ na ngosipụta okpomọkụ adịghị agbanwe agbanwe, iji hụ na ịgbado ọkụ ruru eru.
Iji fim a mee ihe 100%, ọ nweghị ihe efu n'etiti akpa na otu.
A na -akpụpụta akpụzi ahụ n'ụzọ pụrụ iche. A ga -ebipụ akpa ikpeazụ nke ndị otu mbụ yana akpa akpa kpụrụ nke ndị nke ikpeazụ. Ọ dị mma maka ịdọrọ ihe nkiri mgbe ị na -agbatị akpa. Naanị otu sistemụ na -ekwe nkwa ịgbatị ihe nkiri na ịgbatị akpa nwere ike ime ya n'otu oge. .
Mgbe ị na -agbanwe ebu maka nkọwapụta ngwaahịa dị iche iche, naanị mkpa ka ị gbanwee ebu dị elu, ebu ala na -agbanwezi nke ọma, nke nwere ike ịchekwa oge nbipu nnọchi. A na -akpụ akpụ site na ihe pụrụ iche na usoro pụrụ iche nke ndị na -emepụta ebu pụrụ iche, echekwara na ọ bụghị akara maka ịdị mma na ndụ ọrụ nke narị nde akpa.
Akpa Akpa jikọrọ ọnụ Welding & Waste Edge Removing Station
Dị ka njirimara plastik ịgbado ọkụ, ịgbado ọkụ oyi kwesịrị ịnabata ozugbo iji mepụta ya mgbe ịgbado ọkụ okpukpu abụọ dị elu. Nke a nwere ike hụ na ịgbado ọkụ plastik na -eweta ọdịdị dị mma. Yabụ, ọdụ ụgbọ mmiri ịgbado ọkụ nke abụọ chọrọ ịgbado ọkụ oyi, yana okpomoku ọkụ nke ezigbo mmiri jụrụ oyi (15ºC-25ºC), oge na nrụgide na-agbanwe agbanwe.
Site na imepụta patent, ọdụ mwepụ ihe mkpofu dị mfe na ntụkwasị obi, ọnụego ngafe dị elu ruo 99% na karịa. Mkpanaka ntuziaka dị n'elu na nke ala na -ejikọ ihe nkiri mkpofu ahụ mgbe akpa kpụrụ ya dọwaa ya site na cylinder ntuzi aka, iji mezue akpa ahụ. A na -anakọta ihu mkpofu nwere akụkụ atọ site na ngwaọrụ pụrụ iche. Ebe mwepụ ihe mkpofu akpaka na -akpaghị aka nwere ike ọ bụghị naanị belata mmetụta adịghị mma nke ịdọka mmadụ, kamakwa hụ na ọdịdị akpa mara mma.
Nabata nha E + H nke na -enyocha oke mmiri na sistemụ njupụta dị elu.
Mgbapụta njikwa ugboro ugboro na-achịkwa nrụgide ahụ, jiri ọkpọ silicone ọgwụ na-eguzogide nrụgide dị elu jikọọ pipeline, mmezi dị mfe, enweghị ebe nhicha nwụrụ anwụ.
Na -ejuputa isi na -anabata teknụzụ patent nke akara ala dị larịị, enweghị kọntaktị na interwall ọdụ ụgbọ mmiri ka esemokwu ọ bụla ghara imepụta ihe ahụ; ọ na -ezere oke mmiri nke kpatara ngbanwe nke ọdụ ụgbọ mmiri iji mee ka ọdụ ụgbọ mmiri kpuchie isi ya.
Ọ na -ejikwa njikwa PLC dị elu yana usoro ọnụ ọnụ valvụ, sekit dị mfe, mmeghachi omume ngwa ngwa, nchekwa na ntụkwasị obi. Ejikọtara akụkụ mmeju na akụkụ akara n'ime otu, ọ chọrọ naanị otu sistemụ nchịkwa eletriki na otu onye na -arụ ọrụ igwe igwe; opekata mpe otu onye ọrụ na -ebelata, na -ezere ọghọm dị ka enweghị nkwekọrịta n'etiti ndị na -arụ ọrụ abụọ, ma na -abawanye nchekwa na ntụkwasị obi nke akụrụngwa.
Ihuenyo mmetụ aka ma na -arụ ọrụ njikwa okpomọkụ niile nke ọma. Karịsịa na -enye obere mgbanwe n'oge mmalite na ịkwụsị, ndidi nwere ike ịbụ ± 1 ℃.
A na-etinye ogwe nbipute na efere aluminom site na mkpọchi mkpọchi S/S, zere eriri oghere rụrụ na efere ahụ ka ejiri ya mee ogologo oge.
A na -etinye mpịakọta ihe nkiri ahụ site na esemokwu edo edo sitere n'akụkụ anọ iji hụ na esemokwu ihe nkiri ahụ na -aga nke ọma. A na -edobe mpịakọta ihe nkiri ahụ n'akụkụ aka ekpe na n'akụkụ aka nri site na mbadamba ihe ndozi, iji hụ na ọsọ nri na izi ezi.
Ebe a na-ekpo ọkụ na ebe a na-ekpo ọkụ na-ewere nyocha agịga nke mmiri na-ebubata iji chọpụta okpomọkụ ebu, nrụnye dị mma na ịtọpụ, na-adịghị ahụkebe imebi, ndidi n'ime ± 0.5 ℃.
Gbanwee ụzọ idobe akara iji chedo cylinder, zere ikpo ọkụ ogologo oge na ya.
Ọkachamara wiring mpụga, kewaa waya na -eso ọkwa dị iche iche, ọdịdị dị mma na mmezi dị mma.
Dozie ebu dị ala, mana jigide efere jụrụ oyi, iji chekwaa ihe nkiri mgbe igwe mechiri.
Mkpuchi okpomoku gbara gburugburu na-ewepụta ebu pụrụ iche, wụnye efere jụrụ oyi nke ebu dị n'elu ya na nke nwere oge opupu ihe ubi.
Tinye sistemụ nri akpaka iji dozie nsogbu nke igbochi na mkpọchi, belata ike ọrụ. Tinye ngwaọrụ nhicha na mgbake nke ionic iji mee ka idoanya ngwaahịa dị mma.
Nke gara aga: Usoro mmepụta ahịhịa ahịhịa (mmịpụta Artemisinin, mmịpụta CBD)
Osote: Usoro nrụpụta Hemodialysis
Peritoneal Dialysis Solution, capd, line production, CAPD Dialysis production line
Igwe Ampoule À Coudre Led, Ampoule Machine À Coudre Bernina, Igwe eji emejuola agịga, Igwe Njuputa Ejuju Ejupụtara, Disposable ntụtụ & agịga Production Line, Igwe Ampoule À Coudre Singer,